सर, हाम्रो स्कुल कहिले खुल्छ? :: Setopati
सर, हाम्रो स्कुल कहिले खुल्छ?
श्रेया खड्का काठमाडौं, जेठ २७
स्कुल हाम्रो ज्ञानको मन्दिर हो। हामीले स्कुलमा ज्ञानसँगै जीवनमा चाहिने अनुशासनसम्बन्धी कुराहरू सिक्छौं। सरहरूले हामीलाई स्कुलमा पढ्न, लेख्नसँगै शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन व्यायम र खेलकुद पनि सिकाउनुहुन्छ। सँधै साथीहरूसँग छलफल गराउँदै हामीलाई नयाँ-नयाँ कुरा सिक्न उक्साउँदा आहा! कति मज्जा आउँथ्यो।
स्कुल लागिरहँदा कहिले स्कुल बिदा होला भनेर हामी साथीहरू बीच कुरा गर्थ्यौं। र, बिदामा खेल खेल्ने भनेर कति योजना बनाउँथ्यौं। दिनहरू रमाइला थिए। अहिले त सपना जस्तो पो भइसकेछ स्कुल जाने कुरा पनि।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरले त्यति त्रास फैलाएको थिएन। तर यसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै स्कुल बिदा भएको पनि लगभग एक महिना बढी भइसकेछ। सुरूका केही दिन त बिदा भएर एकदम रमाइलो भए जस्तो लागेको थियो। किनभने घरमा बसेर मज्जाले टिभी हेर्न पाइन्थ्यो। अनि घरमा ममी-बाबा र भाइसँग समय बिताउँदा रमाइलो नै हुन्थ्यो।
आजकाल त दिनहरू साह्रै अल्छी लाग्दो हुँदै गएका छन्। कति दिन खेल्ने? कति दिन टिभी हेर्ने? अहिलेचाहीँ स्कुलको धेरै याद आइरहेको छ।
दिनहरूलाई राम्रो बनाउन आजकाल त म ममीसँगै भान्सामा खाना पकाउन, भाँडा माझ्न अनि घर सरसफाई गर्न सिक्दैछु। स्कुलमा किताब पढेर सिकिइन्थ्यो तर घर पनि एउटा स्कुल रहेछ। म यो समय घरायसी ज्ञान लिँदैछु।
सिक्ने कुरा सधैँ किताबमा मात्र हुँदो रहेनछ भनेर ममी र बाबाले सिकाउनु भयो। मलाई त खुब रमाइलो लाग्यो।
महामारी त सधै यसरी नै रहिँरहला जस्तो छ। रोग सबै निको होला जस्तो पनि छैन। हाम्रो स्कुलमा अनलाइन कक्षा भए पनि कक्षामा पढेँजस्तो भएको छैन। कहिले स्कुल खुल्छ र मज्जाले साथीहरूसँग अंगालो हालेर पढ्न पाइएला?
(श्रेया खड्का श्री ओरिजिन निम्न माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनतर छिन्)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २७, २०७८, १७:५४:००